Tailwind Gadzira: Gadzira, Rongedza, uye Pupa Akanaka Pini paPinterest
China, Kurume 10, 2022 China, Kurume 10, 2022 Douglas Karr
Tailwind Gadzira inoita mugadziri-mhando Pinterest Pini nekukurumidza uye inobvumidza iwe kukwenenzvera uye nekugonesa ako ese ePinterest kushambadzira zvirinani kupfuura nakare kose. Mukudzvanya kumwe chete, iwe unokwanisa kushandura mafoto ako kuita akawanda emunhu akasarudzika Pini dhizaini mazano. Iyo yese-mu-imwe chishandiso inoita kuti iwe ugadzire, kuronga, uye kushambadza Pinterest. Maitiro Ekugadzira neTailwind Gadzira Heino vhidhiyo iyo timu yakaisa pamwechete mashandisiro eTailwind Gadzira. Tailwind Gadzira inogonesa vatengesi vePinterest